US CPI (အမေရိကန် စားသုံးသူများ၏ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေမှုအခြေအနေ)
အောက်တိုဘာလအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စားသုံးသူဖောင်းပွမှု ဒေတာကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်.
အမေရိကန်၏ CPIဒေတာမှာ သြဂုတ်လတွင် ၀. ၄%သာရှိခဲ့ရာမှ စက်တင်ဘာလတွင် ၀. ၅%အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သော်လည်းျေကွက်က ခန့်မှန်းထားသည့် ၀. ၆%အထိတော့ မရောက်ရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါသည်. ငွေဖောင်းပွမှုများလေလေ USDအတက်အတွက် ပိုကောင်းလေလေဖြစ်ရာ ယခုထုတ်ပြန်မည့် CPIဒေတာသည် ထရိတ်ဒါများအတွက် အရေးကြီးသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ယခုထုတ်ပြန်မည့်ဒေတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီး USDနှင့်တွဲနေသော ငွေကြေးအတွဲများကို ရောင်းဝယ်လိုက်ပါ.